Ukufumana kwakhona i-2GB yePST yeFayile.
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Ukufumana kwakhona i-2GB yePST yeFayile
DataNumen Outlook Repair -Ukufumana kwakhona i-2GB yePST yeFayile
usebenzisa DataNumen Outlook Repair ukubuyisa ngaphezulu kwe-2GB ifayile yePST, ngokuthi:
Yiguqulele kwifomathi entsha ye-Outlook 2003.
Yahlulahlule kwiifayile ezincinci ezininzi
IMicrosoft Outlook 2002 kunye neenguqu ezisezantsi zinciphisa ubungakanani befayile yePST ukuya kwi-2GB. Nanini na xa ubungakanani befayile ye-PST ifikelela okanye igqitha kulo mda, awuyi kuba nakho ukufikelela kuwo, okanye ngekhe ungeze kuyo nayiphi na idatha entsha. Oku kubizwa ingxaki yefayile yePST enkulu.
IMicrosoft ayinayo indlela eyoneleyo yokusombulula ingxaki. Esona sisombululo sisona siyimveliso yethu DataNumen Outlook Repair, enokufumana ifayile yePST engaphezulu ngokulula nangokufanelekileyo. Ukwenza oku, zimbini iindlela ezizezinye:
Ukuba une-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakiwe, unako Guqula ifayile yePST engaphezulu kwifomathi entsha ye-Outlook 2003, engenawo umda wobungakanani be-2GB. Le yeyona ndlela ikhethwayo.
Ukuba awunayo i-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu, unako Yahlulahlula-hlula ifayile yePST kwiifayile ezincinci ezininzi. Ifayile nganye inenxalenye yedatha kwifayile yoqobo ye-PST, kodwa ingaphantsi kwe-2GB ukuze ukwazi ukuyifumana nge-Outlook 2002 okanye iinguqulelo ezisezantsi ngaphandle kwengxaki. Le ndlela ayinangxaki kangako njengoko kufuneka ulawule iifayile ze-PST ezininzi emva kwenkqubo yokwahlulahlula.
Ulwazi olunenkcukacha malunga nefayile yePST engaphezulu.
Ukufumana kwakhona i-2GB yePST yeFayile